04 May, 2018 - 00:05	 2018-05-03T16:13:51+00:00 2018-05-04T00:01:33+00:00 0 Views
NDINOTENDA ndakamuwana wangu kuburikidza nechirongwa chenyu saka vachiri kufona pa0779 203 075 chiregerai.
Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20-34. Andifarira ngaandibate pa0716 373 326.
Makadii veKwayedza? Ndokutendai nechido chenyu. Ndakamuwana wepamoyo saka vachiri kufona pa0774 289 101 ngavachirega havo.
Makadii? Ini ndiri musikana ane makore 20, handisi pamapiritsi uye ndotsvakawo mukomana ane rudo ane makore 30 zvichidzika kwete murume wemunhu. Nhamba dzangu 0718 900 479.
Ndiri mudzimai ane makore 46 ndinotsvagawo murume ari pamakore 46 – 55, nhamba dzangu 0718 600 367.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga mudzimai wekuroora ari pakati pemakore 22 kusvika 25. Zvizhinji totaura pa0784 315 187.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndotsvakawo musikana akanaka wekuroora. Ari pachokwadi ngaandibate pa0715 038 573.
Ndiri murume ane makore 48 nevana 2. Ndinotsvagawo mukadzi ane vana vake. Anondida ngaandibate pa0777 889 642.
MakadiI veKwayedza? Ndinotsvakawo musikana ane makore 20 kusvika 23. Andida ngaandibate pa0771 170 062, moita zvemasms kana kufona totaura.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 32 uye handina mwana, ndinotsvakawo mukadzi wekuroora asina kumboroorwa. Ane makore 18-26 ngaandibate pa0783 996 450.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa. Ndinotsvakawo murume ane makore 30 kusvika 35 anoda zvekuroora uye anotya Mwari. Ndine vana 2, anoda nezvangu ngaandibate pa0782 481 428.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2, ndinotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 47 ane vana vakewo. Ngaave ari pamushonga nokuti ini ndiripo. Ndinobatika pa0739 621 708.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvaka musikana ane makore 21-30. Ndinobatika pa0716 470 070.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 20 akanaka uye asina chirwere. Nhare yangu 0774 273 029.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana 1, handisi pamushonga. Andifarira nhamba dzenhare 0772 703 547.
Ndiri mukomana ane makore 18, ndinotsvagawo musikana wekufambidzana naye ane makore 19 zvichidzika uye anogara muHarare. Andifarirawo ndibate pa0785 771 975.
Makadii? Tinotenda nechirongwa asi ndiri kusangana nematsotsi vasiri pachokwadi. Ini ndiri murume ane makore 41, HIV+ uye ndinotsvaga mukadzi wekugara naye ane makore 41 zvichidzika. Ndinoda kunyanya akafirwa seni, ndinogara pamusha kuChivhu. Ari pachokwadi ndibate pa0718 918 303.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinoda kukutendai ndakamuwana wandaida. Vange vachifona pa0784898231 ngavachirega.
VeKwayedza ndibatsireiwo ndotsvakawo mukadzi wekuroora, ndine makore 23. Vari kuda kutamba ndiregerereiwo. Nhare yangu 0783 173 367
Makadii veKwayedza? Ndiri mai vane vana 2, ndotsvagawo murume akavimbika. Anoda anofona pa0785 356 217.
Makasimba here? Ndiri mudzimai ane makore 34, HIV positive nemwana 1 uye ndinotsvagawo murume anowirirana nezvandiri. Ngaandibate pa0783 219 746.
Ndiri mukomana ane makore 29, ndotsvakawo musikana ane makore 26 zvichidzika. Andida ngaandibate pa0733 738 598.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndinotsvagawo mukadzi wekuvaka imba naye ane makore 20 kusvika pa23. Andida ngaandibate pa0784 625 635.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvakawo musikana kana mudzimai ane mwana ari kuda zvemusha. Ndibatei pa0773 740 065.
Ini ndiri murume ane makore 37 ndodawo shamwarikadzi ine makore 30 – 37. Ari pamushonga ndibate pa0772 609 827.
Ndiri murume ane makore 32 ndotsvaga mukadzi mudzidzisi kana mukoti asina mwana seni ane makore 22 – 29. Ndiri muHarare. Nhare yangu 0771 475 394.
Ini ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana 1, ndinodawo murume ane makore 21 kusvika 28. Ngaandibate pa0783 986 195 asi vane vakadzi bodo.
Makaita basa veKwayedza, ndakamuwana wandaida saka vamwe vose ngavachirega kufona pa0774 225 353.
Ndiri mudzimai ane makore 30 nevana 3. Ndinoda murume anoda zvemba, handisi pamushonga. Varume vevanhu kwete, andifarira ndibate pa0785 467 557.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 43 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi anoda kuroora. Ndiri HIV positive, nhare yangu 0736 681 384.
Ndiri murume ane makore 38 nevana 2, handinwe kana kuputa uye ndiri HIV negative. Ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi ari muHarare kana pedyo. Anoda ngaandibate pa0716 258 003.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore 18-21. Ngaave ane rudo anotya Mwari. Anoda ngaandibate pa0785 201 379.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 34 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane rudo anoda zvemusha. Anoda kunoongororwa ropa ngaandibate pa0716 396 604.
Ndiri murume ane makore 35 ndotsvaka musikana kana mukadzi wekudanana naye nyangwe ane mwana 1 asi vanotamba kwete. Ngaave anonamata, anotya Mwari. Ndine vana 2 uye ini ndakanaka. Ndibatei pa0714 231 273.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo musikana ane makore anoverengeka wekuvaka naye imba akazvipira anonamata. Ndinoda asiri pamushonga, kana pane andifarirawo ngaandibate pa0719 702 761.
Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pamushonga. Ndine vana 2, nhare yangu 0737 541 184.
Ndiri kutsvagawo penpal yechirume asina mukadzi. Ini ndiri mukadzi ane makore 49, ndoda ane makore 50 zvichienda mberi. Anondibata pa0776 012 078.
Munofara here? Ndiri murume ane makore 42, ndiri pamushonga uye ndiri kutsvagawo mudzimai ane makore 30-38 ari pamushonga seni. Ngaave ane vana 2 zvichidzika. Nhare yangu 0734 337 139.
Makadii veKwayedza? Makaita basa, ndakamuwana wekufambidzana naye saka vanga vachifona pa0777 143 454 chiregai.
Ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa, ndinotsvaka mukadzi wekuroora akavimbika asina HIV. Ada nezvangu ngaandibate pa0776 586 215.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 28 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana ane makore 19-26 anoda zvemba neni kwete zvekutamba. Ngaave anotya mwari nekuti ini ndinotyawo Mwari uye ave akanaka pachiso nemwoyo. Ndinoita mabasa emawoko, anondida anondibata pa0716 853 385.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 32 nemwana 1, ndinodawo murume ane makore 35 kusvika 40 ane mwana wakewo 1. Matsotsi kwete, ndoda ari serious. Nhare yangu 0777 540 565.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana ari pakati pemakore 18 kusvika 24 ari pamushonga. Nhare dzangu 0737 386 537.
Ini ndiri kutsvagawo mukadzi wekuwadzana naye ane mota, ndinoshanda uye ndinogara kuRuwa. Nhamba dzangu idzo 0771 428 070.
Ndiri mukomana ane makore 29 nemwana 1, ndiri kutsvakawo musikana kana mukadzi ane makore 22 kusvika 26. Anoda kuwanikwa ndibate pa0783 533 146.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38, ndinotsvagawo shamwari yekufambidzana nayo. Zita rangu ndinonzi Elizabeth, nhare yangu 0775 063 179.
Ndiri murume ane makore 48, ndinotsvakawo mukadzi anoda zvemusha ane makore 30 kusvika 38 anoda zvekunamata positori. Ane mwana mumwe kana vaviri, ngaandibate pa0733 730 057.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvakawo musikana wokutandadzana naye ane makore 18 – 23. Adawo zvake tumira sms pa0777 371 750.
Ndiri musikana ane makore 18 ndinotsvakawo mukomana ane makore 20 kusvika 25. Nhare yangu 0776 540 022.